Jameos del Agua मा रमाईलो यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Lanzarote, के हेर्ने
टापु Lanzaroteक्यानरी टापुहरूमा सब भन्दा बढी जनसंख्या मध्ये एक हो जैव क्षेत्र रिजर्व त्यसैले यसको प्रकृति मात्र सुन्दर छ। यो क्षेत्र को एक सबसे पर्यटन गन्तव्य हो र वर्ष भर खुल्ला हतियार संग आगन्तुकहरुलाई स्वागत छ।
तिनीहरू मध्ये धेरैजना भ्रमण गर्छन् जामेस डेल अगुआ, एक अद्भुत ठाउँ जुन प्रकृति, संस्कृति र कला संयोजन गर्दछ। के हामीलाई यो थाहा छ?
1 जामेस डेल अगुआ
2 Jameos del Agua भ्रमण गर्नुहोस्
जामेस डेल अगुआ
हामीले माथि भने जस्तो छ प्रकृति, कला र संस्कृति संयोजन गर्दछ। सिद्धान्तमा भनौं कि शब्द «jameoLocal स्थानीय मूलको हो र ज्वालामुखी गतिविधिको कार्यद्वारा जमिनमा उत्पन्न हुने प्वाललाई बुझाउँदछ: भूमिगत ज्वालामुखी ट्यूब डुब्छ र यसैले जमिनको पछिल्लो सब्सिडेसनलाई निम्त्याउँछ।
लस जामेस डेल अगुआ, तब, तिनीहरू कोरोना ज्वालामुखीको उत्पादन हुन्, 600०० मिटर अग्लो ज्वालामुखी शंकु जुन २१ हजार वर्ष पुरानो हो। वास्तवमा यसको ज्वालामुखी ट्यूब समुद्रमा बग्यो र यसको केही अंशले गुफा वा जामेज उत्पादन गर्ने डुबायो। त्यहाँ दुई धेरै लोकप्रिय छ, जामेस डेल अगुआ र कुएवा डे लस भर्डेस। अर्को अंश खाली रहेको तर डूब्यो, र यो पानीमुनि सुन्दरता अटलान्टिकको सुरुnel भनेर चिनिन्छ।
जमेओस डेल अगुआको मामलामा तिनीहरू किनार नजिकका छन् र त्यहाँ कुल तीन छन्, Jameo ग्रान्डे, Jameo de la Cazuela र Jameo Chico जहाँ हामी भित्री भाग लिन सक्छौं। तर सत्य यो हो कि यी "गुफाहरू" रहन सकेनन् किनकि प्रकृतिले उनीहरूलाई सृष्टि गर्‍यो र वैज्ञानिकहरू अघि बढे किनकि उनीहरू विज्ञानको लागि धेरै चासो लुकाउँछन्। र वैज्ञानिकहरु मात्र होइन कलाकार पनि: Cesar Manrique।
É ० को दशकमा सेसार मान्रिक पहिले नै मरे, तर यो थियो स्थानीय चित्रकार र मूर्तिकार प्रख्यात उनका सबै कार्यहरू टापुहरूको प्राकृतिक सुन्दरताको रक्षाको वरिपरि घुमाए। उनले १ 1968 .XNUMX मा भएको एउटा विचारको आधारमा उनले यस संस्थालाई उदय गरे जामोसको कलाकार हस्तक्षेप। कार्यहरू त्यस दशकको अन्त्यमा शुरू भए तर कामहरू अगाडि बढ्दै गए र जमिनले आफ्ना विशेषताहरू देखाउन थालेपछि परियोजना परिवर्तन भयो।
१ round 1977 को आसपास सामान्य संरचना पूरा भयो र कला, संस्कृति र पर्यटन को लागी केन्द्र। एक दशक पछि ओडिटरियम people०० व्यक्तिको लागि खोलियो र उही मितिको लागि, र त्यसबेलादेखि केही कामहरू जारी रहन्छन् जुन वैज्ञानिक समुदायलाई ज्वालामुखीमा समर्पित छ।
Jameos del Agua भ्रमण गर्नुहोस्
Jameos del Agua लाई तपाईं Jameo Chico को माध्यम बाट प्रवेशएउटा सानो ढोकाबाट। त्यसपछि हामी ज्वालामुखीको ढु stone्गामा कुँदेको घुमाउरो सीढ़ि तल झर्छौं र काठले सुदृढ पार्छौं जबकि हामी यो सानो गुफाका विशेषताहरू विचार गर्दछौं। यो एउटा खुला भाँडा होईन, यो वनस्पतिसहितको गुफा हो र केहि सजावटी तत्वहरू जुन दृश्यलाई छक्क पार्दछ। साथै, यहाँ एक बार र एक रेस्टुरेन्ट छ जुन ताललाई बेवास्ता गर्दछ।
हो, यहाँ पनि त्यहाँ क्रिस्टल सफा पानीको साथ एक प्राकृतिक ताल छ स्थानीय माछाको साथ र उदाहरणका लागि, अन्धा केराहरू नेपथ्यमा। गुफा अन्धकार भएको कारण त्यहाँ कुनै pigmentation छैन र त्यसैले यो सेतो केकडा संसारमा अद्वितीय छ र धेरै सानो, मात्र एक सेन्टीमिटर लामो। स्नेहको साथ तिनीहरू परिचित छन् "Jameitos"।
त्यहाँ केवल एउटा पट्टि होइन तर दुई हो, चट्टानहरूमा भएको फाईदाको फाइदा उठाउँदै, र पनि नृत्य फ्लोरहरु ठीक छ, एक नाइट क्लबले काम गर्न सक्दछ। मार्ग वातावरणीय भेषमा हिंड्ने बाटोको साथ जारी रहन्छ जुन हामीलाई ताल पार गर्न र हरियो पर्खालमा चढ्न अनुमति दिन्छ। यो पदयात्रा ले हामीलाई लाग्छ जमेओ ग्रान्डे, जहाँ 600०० व्यक्तिको क्षमताको अडिटोरियम अवस्थित छ। कलाकारले गुफाको आकारको फाइदा उठाएर यसलाई सिर्जना गर्नका लागि, एउटा आडित कटौती र राम्रो ध्वनिकीको साथ, र यो हिडनको अन्तिम अन्तिम पोइन्ट हो।
यो सभागार २०० until सम्म धेरै वर्षका लागि बन्द थियो, तर त्यस पछि यसले काम गर्दछ र यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ शास्त्रीय संगीत कन्सर्ट र फिल्म स्क्रीनिंग। जब स्टेज समाप्त हुन्छ, अर्को र अन्तिम बबलको खुट्टामा जुन हामी पहुँच गर्न सक्दछौं, Jameo de la Cazuela हो। यसको अन्तमा, नुनिलो पानी वसन्त झैं बाहिर निस्कन्छ।
के तपाईं यी परी कथा वातावरणमा यी कार्यक्रमहरूको मजा लिन कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अद्भुत! त्यसोभए तपाईं एक पटक यी तीनवटा गुफाबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ ज्वालामुखीहरूको घर मा जानुहोस्। भवन आधुनिक छ र लन्जारोटे टापुमा सान्दर्भिक जानकारी राख्छ। उदाहरणका लागि त्यहाँ धेरै मात्रामा ज्वालामुखी, मापनका तत्त्वहरू छन्, र यो यो हो कि विश्वव्यापी क्षेत्रबाट समय-समयमा विशेषज्ञहरू प्राय: भेट्छन्।
व्यावहारिक जानकारी Jameos del Agua भ्रमण गर्न
स्थान: Carretera de Órzola, LZ-1
समय: बिहान १० देखि साँझ 10: .० सम्म खुल्ला, र मंगलवार र शनिबार राती6देखि साँझ २ सम्म। बुधवार गर्मी को समयमा यो एकै समयमा खुल्छ। रेस्टुरेन्ट बेलुका to देखि ११::30० सम्म खुल्छ।
मे १ 18, डिसेम्बर २ and र the१ मा केन्द्र बन्द हुन्छ 24::31।।
मूल्य: adult, e० युरो प्रति वयस्क (% र pm सम्म बीचमा २०% छुट), 9,,50 देखि children देखि १२ वर्षका बच्चाहरूका लागि, समान छुटको साथ, र क्यानरी टापुहरूमा बस्ने बच्चाहरूको लागि,,, e० यूरो। । वयस्क बासिन्दाहरूले,, e० यूरो तिर्छन्। यदि तपाईं pm बेलुकी पछी प्रविष्ट गर्नुभयो भने तपाईंले कन्सर्टको पूरक २ यूरो तिर्नुहुन्छ। Years बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरु स्वतन्त्र छन्।
त्यहाँ विशेष बोनस छन् जुन तपाईं पैसा बचत गरेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो बोनस एक हो जसमा जामेस डेल अगुआ, कुएवा डे लस भेर्डेस र क्याक्टस गार्डन वा मिराडोर डेल रियो जाने सम्भावना समावेश छ।
एक घन्टा एक असंगत भ्रमणको लागि अनुमति दिनुहोस् त्यहाँ एक भर्चुअल गाइड छ जसले तपाईंलाई यसलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ र कला, संस्कृति र पर्यटन केन्द्रहरूको वेबसाइटबाट तपाईं यो ब्रोसर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ एक रेस्टुरेन्ट, एक पसल, नि: शुल्क वाइफाइ र कार र साइकलको लागि पार्कि। छ।
आरामदायक जुत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस् किनकि यो ज्वालामुखी पृथ्वी हो र यदि तपाइँ गर्मी, चश्मा, टोपी र सनस्क्रीनमा जानुहुन्छ।
तपाईं शिशु क्यारिजका साथ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले एक झोला ल्याउनुहोस् - कar्गारू। गाईड कुकुर बाहेक घरपालुवा जनावरहरुलाई पनि अनुमति छैन।
फोटोहरू अनुमति छ।
Jameos भ्रमण गर्न सुविधाजनक छ १० देखि ११ बिहान र साँझ 10 देखि from सम्म। तिनीहरू उच्च मौसममा पर्खनु उचित समय हो, जुन जुलाई १ देखि सेप्टेम्बर from० सम्म र इस्टरमा पनि छ।
तपाईं एक महान अनुभव को लाभ उठाउन र एक कन्सर्ट संग खानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। राम्रो खाना, राम्रो मदिरा र रोमान्टिक र अविस्मरणीय वातावरण। प्रति व्यक्ति करीव e० यूरो हिसाब गर्नुहोस्, यद्यपि बच्चाहरूले लाला कार्टे खाए किनभने निश्चित मेनु उनीहरूको लागि अलि धेरै ठूलो छ। तपाईं देख्न रूपमा, यो जामेस डेल अगुआ तिनीहरू एक यस्तो स्थान हो जहाँ तपाईं लान्जारोट भ्रमण गर्नुहुन्छ भने याद गर्न सक्नुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » Lanzarote » Jameos del Agua मा रमाईलो
बिडोसको मध्यकालीन शहरमा के हेर्ने